သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီမှာ ခန့်အပ်ခံရသူတွေ အများစုဟာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် နိုင်ငံအတွက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ လွှတ်တော်တွင်း ဥပဒေပြုရေး ကိစ္စတွေမှာ အတိုက်အခံတွေ လိုလားတဲ့ အပြောင်းအလဲမျိုး ဖြစ်လာဖို့ကတော့ ခက်နေဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တချို့က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတုန်းက စက်ခလုတ်သုံးပြီး လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ် သုံးခဲ့ပေမယ့် အခုတခေါက် ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဗြောင် မဲပေးစနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေရာမှာ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေလည်း ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ NDF ပါတီ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဝင်းကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲေပးစနစ္ မသံုးရဲတာ ကၽႊန္ေတာ္တို. ၾကံ့ဖြတ္လူၾကီးမ်ားက ကိုယ့္အမတ္ေတြကိုယ္ မယံုလို.ပါ တကယ္ပါ။
Sep 11, 2011 01:06 PM
This is the Myanmar Way of Demovracy, Like Myanmar Socialism in 1960 to 1980s.
Sep 11, 2011 08:14 AM